Tarsimoo fi saganta qabsoo biyya galchuu jeedhu murtessa ta’aa jira.
Biyya ala ta'aan qabsoo biyya keessati gegesun bala malee bu'aa hin qabuu, kanafuu dhaabilee Oromoo hundi ykn gari tokko biyya keessa galee qabsoo egaluu qaba sagantan jeedhu itti amanama jira. Habashoon Amhara yeeroo ama kana:-
Afaan keessan hin dubatiina,
Maqa Oromoon of hin wamina,
Ani Oromoo ofiin hin jeedhina,
Wayee Oromoo hin bareesina;
Media Ethiopiati wayeen Oromoo hin dubatamin;
Naannoo Oromiyya kan jeedhu baduu qaba;
Siirin Minilik deebiyuu qabaa;
Ortodoksiin malatoo Ethiopiati isaati amanuu qabduu
Addaan, siirbi fi barumsii hundi kan gegefamuu qaba afaan Amaran jeedhu;
Afaan tokko Amharfa, Alaba Tokko, biyya Tokko Ethiopia qabadhu jeedhu.
Kana bakkan ga’uuf amoo dhaabilee Habasha 10 ol Eritrea Asmara irra TPLF/OPDO fi Oromiyya baleessani. OPDO haaraa J/Kamal Galchuu “ABO jijirama” Dr. Negasoo “UDJ” farada goodhatan Oromiyya seeneefu qoophi irra jiru. Dhaabilee Oromoo akka ABO, ODF fi WFDO/KBO amoo baleesuu kan jeedhe saganta dhokssa qabatan adeema jiru. Isaa dura amoo Nationalistota, Hayuulee Oromoo fi Activistoota Oromoo hamilee cabsuun media irra baleesuu fi wal lolchisuun wal dura dhabuu saganta jeedhun bafatani Oromoo irrati dulama jira. Dhaabilee Oromoo rakko kana keessa ummataa isaan basuuf wal dhabdee Oromoo giduu jiru hunda dhiphisun marii atatama goochuu qabu. Yeeroo diin boola baalaa nu qoota jiru kana tokko tanee diina boola ini qooteti awaluu qabna.
Oromoon garibuma jala basuuf dhaabbilee Oromoo mirga hireemurteefana Oromooti amana haalaa dure tokko malee lafa jalan utuu diini isaan irrati hin beekin tokkuma umachuu qabu. Keesumati qabsoo biyya keessati gegesu male biyya hoolaa irra adeemun bu’aa hin fiduu wari jeedhan fi abbaa biyyumaa Oromoo kan barbadan hundi (OPDO, WFDO/OBK, ODF, ABO fi kkf) waan haaraa diini hin egiin gadi basuu qabu. Kun amoo Oromiyya abbaa biyya goochuuf murtesadha. Miseensoon dhaabilee Oromoo bayyen tokkoman ijoole Oromoo giduuti akka ta’uu feedhu. Amhara fi Tigre dabaren nu bulchan kana irra angoo fudhachun Oromo qooda isaa gudisun akkasumas Konfedereshiinin ummun lammi birra waliin ilee jirachuu nu dandeesisa jeedhu. Tokko ta’uu banan garuu jeequmsa Ethiopiati ta’uu keessa hundu ga’ee isaa fudhatee gargari deema ykn abbaa human hunda caalaa qabu tokkon dhiitaman bulu dhufaa.
Humini Eritrea keessati gurmayee Oromo mogati dhisee deemu kun Ethiopia yamuu galuu TPLF qoofa utuu hin tanee Oromiyyaf Oromoo balesun saganta isaa isaa durati. OPDOn amoo TPLF waliin tokko tatee Oromoo balaa irra hambsuu hin dandeesuu sababin isaa degersa ummataa waan hin qabneef. OPDOn dhaabbilee Oromoo hunda waliin wal tatee Dhaabaa Oromoo cimma tokko dhaabbuun dirqama fi murtesadha. Dhabbi degersa uumata qabuu tokko Human nama fi caassa OPDOn qabduu kana ofiti qabatee humna Habasha sana dura dhabachuun Oromoo balaa irra Hanbisee Abbaa biyya gochuun Motummaa konfederation tokko biyya sun keessati ijaramuu qaba. Ijoole Tigray ilee kana beekan Abba biyumaa Oromoo Oromooti deebsani utuu of isaan fi ummataa isaan ilee hin gagaiin naggan biyya isaan keessa jirachuu qabu. Akka kana dura Oromoo garbonfanee jirana yoo jeedhan Oromoo yoo Humna Amhara isaan irrati caalisee iaalee ilee Amhari Togrota lafa sun irra isaan qulqulesuu. “ Ya soogida yoo ofif jeete mi’aii ykn dhagadha jeedhan sii gatuu” jeedha Oromoon. Garuu amoo Tigreti si ta’ee Gofta isaan Amerikati ilee haqa jiru itti himuu qabna.
Tigron qabeenya samantan fi uumata isaan fudhatan Tigray jirachuu yoo barbadan Oromoof abbaa biyuma isaa gadii dhisuuf dha. Habashoon yoo cimman kara Asmara lolan jeequmsi biya sunati ka’uu Ethiopia bakka 4 kutee biyya Afuri dhaabachuun dirqama ta’a ykn Tigray dhabamu ta’aa. Garu Tigren yoo haxaroomteef mariin Angoo Oromoti dabarsiti. Oganaanoota fi qabeenya isaan dhabamsifmuu iraa hanbifachun ummataa Tigray amoo balaa badinsa irra hubfachuu danda’uuf Oromoon wal ta’uu qabu. Yoo hanga dhummati deemna Oromoo of jalati qabanee jeedhan Tigray bakka jeedhamu sun dhabemuu mala. Amahari Haaloo hama Tigre hunda irrati ba’achuuf qoophi isaa xumurate jira. USA ilee biyya xixiqoo kana bakka bakkati 4 gargaruu irra Oromoo abba biyya gochuun wari kan ilee nageenyan nannoo isaa akka jiratan haalaa mijeesun beekusa jeena, akka kana durati itti fufu yaalun badiisa Ganfaa Afrikati fida.